Atletico Madrid oo ku guuleysatay koobka UEFA Super Cup, kadib markii ay guul muhiim ah ka gaareen kooxda Real Madrid. – Cayaaraha dunida
Atletico Madrid oo ku guuleysatay koobka UEFA Super Cup, kadib markii ay guul muhiim ah ka gaareen kooxda Real Madrid.
16 Agoosto 2018.
Kooxda kubada cagta ee Atletico Madrid ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay koobkeedii ugu horeeyay ee xili ciyaareedka cusub, kadib markii ay UEFA Super Cup-ka kaga guuleysteen kooxda ay daris wadaaga yihiin ee Real Madrid, ciyaar ku dhamaatay 4-2
Kulanka ayaa qeybta hore lagu kala nastay 1-1 waxaan goolka la hormartay kooxda Atletico Madrid daqiiqadii 1-aad waxaana u dhaliyay laacibka Diego Cost.
Kooxda Real Madrid ayaa sameysay isku dayo badan ay ku raadineesay sida ay goolka barbaraha kaga keeni lahayd naadiga ay daris wadaaga yihiin ee Atletico Madrid ee bilawga ciyaartaba goolkan.
Laakiin Real Madrid ayaa kadib weerar is daba jog ah ay ku qaaday goolka Atletico Madrid, waxay goolka barbaraha ka heshay daqiiqadii 27-aad waxaana u dhaliyay Karim Benzema oo baas qurux badan ka helay Gareth Bale, kana dhigay ciyaarta barbaro 1-1.
Dib markii loogu soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta xidigaha kooxda Real Mad ayaa sare u sii qaaday weerarka ay ku hayeen kooxda Atletico Madrid.
Tababare Julen Lopetegui ayaa daqiiqadihii hore ee qeybta la baad ciyaarta sameeyay badalkiisa ugu horeeyay, si uu ciyaarta wax kaga badalo wuxuuna ciyaarta ka bixiyay Marco Asensio, wuxuuna keensaday Luka Modric.
Wuxuu waqtiga is guro ciyaartana ay socoto kooxda garsooka ciyaarta ayaa wuxuu kooxda Real Madrid ku abaal mariyay rigoodhe, kadib markii uu difaaca Atletico Madrid ee Juanfran uu gacanta ku taabtay kubad isaga oo ku dhex jira xerada ganaaxa.
Daqiiqadii 63-aad ayuu Sergio Ramos gool u badalay rigoorada lagu abaal mariyay, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-1 ay ku hogaamineyso kooxda heysta Champions League ee Real Madrid.
Laakiin kooxda Atletico Madrid oo aan marna ciyaarta ka niyad jabin ayaa la timid goolka barbaraha waxaana markale gaaray shabaka kooxda Real Madrid Diego Cost daqiiqadii 79-aad, kadib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Angel Correa, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 2-2.
Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 90-ka daqiiqo barbaro 2-2 waxaana lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah sida caadiga ah, si loo kala saaro labada kooxood.
Atletico Madrid ayaa waqtigii dheeriga ahaa lagu daray ciyaarta la tamid goolka 3-aad ee ciyaarta, kadib markii uu daqiiqadii 99-aad uu shabaqa kubad qurux badan ku hubsaday Saul Niguez oo caawin ka helay Thomas, wuxuuna ciyaarta k dhigay 3-2.
Wax badan ma aysan kasoo wareegan Atletico Madrid ayaa markle la timid goolka 4-aad ee ciyaarta waxaana daqiiqadii 104-aad u dhaliyay Koke oo sidoo kale caawin ka helay saaxiibkiis Vitolo, waxayna ciyaarta sidaas ku noqotay 4-2.
Ugu dambeyna ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 4-2 ay guusha ku raacday kooxda Atletico Madrid, isla markaana ay gacanta ku dhigtay koobka UEFA Super Cup.